Pantheon: Khibradda Dugsiga Hoose | Laga soo bilaabo Linux
daadi1993 | | Muuqaal / Shakhsiyeyn
Waad salaaman tihiin bulshada Laga soo bilaabo Linux, Elruiz1993 wuxuu ku qoraa maqaal yar / barasho. Dhamaanteen waan ognahay taariikhda kooxda Dugsiga Hoose, kaas oo ku bilaabay sidii xirmo sumadeed, ka dibna mawduuc, qaab ah Nautilus iminkana waxay ka mid yihiin mashaariicda sababay rajada ugu weyn ee laga qabo panorama-ka hadda jira ee distros GNU / Linux.
Kooxdaan waxaa lagu gartaa qorshe ah codsiyo aad u yar, dhakhso, iftiin iyo muuqaal aad u qurux badan (oo dad badani dhahaan waxay u egyihiin MacOSX, fadlan aqri Digniinta 2). Farsamo ahaan markay hadlayaan, waxay ku horumariyaan codsiyadooda GTK3, Vala y C ++, oo sharraxaysa waxqabadka codsiyadaada iyo guud ahaan deegaanka.
Kooxda Dugsiga Hoose wuxuu hadda horumarinayaa nooca labaad ee uu ku shaqeynayo Dugsiga hoose (aad u asal ah), loo yaqaan Luna kuna saleysan Ubuntu. Kuwa doonaya inay tijaabiyaan horumarka Daniel Foré iyo kooxdiisa, waxaan ku rakibi karnaa PPA-yada soo socda Ubuntu iyo noocyo kala duwan (Mid walboo gooni ah):
Fiiro gaar ah: Dugsiga Hoose wuxuu kugula talinayaa Midori, miisaan aad u fudud kuna saleysan WebKit, laakiin waa ikhtiyaari.
Hadda, waxaan cusbooneysiineynaa bakhaarada:
Oo waxaan ku rakibnaa qaybaha Hoose (Khadka kaliya):
Xusuusin 1: Haddii aad soo dirto qalad adiga oo sheegaya in xirmada qaar aan la heli karin, iska dhaafe, Elementary badiyaa barnaamijyadeeda badanaa.
Xusuusin 2: Isticmaalayaasha / taageerayaasha Archlinux, waxaan ku arkay baakadaha AUR laakiin ma aqaano xaaladooda biseyl, marka waxaan jeclaan lahaa inaad siiso isku day oo aad la wadaagto dareenkaaga.
Xusuusin 3: Saaxiibkiis Perseus wuxuu sheegay inuu ku qoray rakibida Fedora xusuusqorkiisa, taas oo aan ku farxi lahaa maadaama aanan helin macluumaad ama hage aan ku rakibo internetka oo dhan (xitaa waxaan gaadhay bogga 40 ee Google, kaas oo waa hore wax badan).
Xusuusin 4: Mawduuca GTK, qurxinta daaqada iyo astaamaha waxaa lagu beddeli karaa GNOME-Tweak-Tool
Dhamaadka rakibidda waa uun arrin dibedda looga baxo oo la doorto "Pantheon".
1 Ku soo dhowow Pantheon
1.1 Slingshot, waa qaab kale oo loo adeegsado barnaamijyada
1.2 Buuq, Ciyaaryahan fudud laakiin awood badan
1.3 Switchboard, aragti ahaan nidaamka ugu fiican
Ku soo dhowow Pantheon
Miiskayaga cusub wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood:
Baarka sare, oo leh waqtiga, codka, shabakadda, kalfadhiga iyo tilmaamayaasha mail / sheekeysiga iyo tabka codsiyada, oo furi doona barnaamijka 'Slingshot launcher'.
Desktop-ka, oo aan u beddeli karno Waraaqda qaab dhaqameed (waxay leedahay taageerada Firefox si looga beddelo biraawsarka).
Dock-ka (Plank), oo shaqadiisu tahay kan xirashada iyo liiska daaqadaha furan.
Xusuusin: Si aad uga saarto wax astaan ​​ah, kaliya u gudub /home/.configure/plank/dock1 oo tirtir arjiga aad rabto (xitaa kan Plank laftiisa).
Slingshot, waa qaab kale oo loo adeegsado barnaamijyada
Slingshot waa furaha dalabka asalka ah, wuxuu leeyahay 2 aragti oo la heli karo si loo muujiyo astaamaha: nooca Icon (wuxuu ku kala saari doonaa dhamaan barnaamijyada sida xarfaha isugu xiga) iyo Liiska Nooca (wuxuu ku kala soocayaa iyaga koox ahaan).
Fiiro gaar ah: Waxaan dareemay cayayaanka dhibta leh ee marka aad gujineysid codsi ama desktop-ka / windows-ka firfircoon, uusan xirneyn, adigoo riixaya tabka "Codsiyada".
Buuq, Ciyaaryahan fudud laakiin awood badan
Ciyaaryahanka asalka ah ee muusikada waa mid fudud oo waa nooc iskutallaab ah oo udhaxeeya iTunes iyo Rhytmbox waana mid wax ku ool ah sidoo kale heer sare. Ka raadi aruurintayada, ku abaabul xarfo ahaan, farshaxan, album iyo nooc. Waxay kaliya leedahay 3 dhibaato: Ma lahan barbaraha, gadaal looma dhaafi karo lagamana xakamayn karo Huteelada. Dhibaatooyinkaas mooyee (wali waa loo hirgalin karaa sida ay hadda u socoto horumarka) waa heer sare
Wareeg, aragti ahaan nidaamka ugu fiican
Bal qiyaas isku soo uruurinta hal barnaamij qaabeynta QT, GTK, Flash Player, Games iyo codsiyo badan. Aragti ahaan waan ku iftiiminayaa maxaa yeelay weli cagaar bay ka tahay oo wax badan kuma kala duwana Xarunta Xakamaynta GNOME, laakiin arrimuhu waa rajo.
Nasiib darrose ma awoodin inaan tijaabiyo qaar ka mid ah codsiyada laakiin weli waxay u muuqdaan kuwo weyn: SNAP (Ku qaado sawirro iyo fiidyow Webcam-ka) Ma aanan ku celcelin maxaa yeelay kamarad ma haysto. Daabac (Xusuusin on Desktop) Ma isticmaalo. Dexter (Xiriirada) Waxaan ku furay si qalad ah, laakiin waxay ku habboon tahay liiska asxaabta Faham (Ilaa intaad kuxirantahay).
Quudiyaha (RSS) Uma isticmaalo maxaa yeelay ma isticmaalo RSS. Xoqo (Tifatiraha qoraalka) waxay umuuqataa mid wanagsan laakiin wax ka bedel .bashrc waana uun qarxay (Way xidhatay). Ugu dambeyntii waan isku dayay Terminal-Pantheon-Terminal (Jidka) Waana wax fiican, iyada oo aan waxba ka dhigayn mid gaar ah marka laga reebo xaqiiqda ah inaysan lahayn menus.
Waxaan ka rakibay deegaanka Lubuntu, markii aan beddelayay fadhiga waxay umuuqatay wax laga xumaado. Waxaan u qaatay inay tahay nooca GTK dartiis sidaa darteed ayaan rakibay (oo aan ka saaray) GNOME-Shell waana la hagaajiyay.
Pantheon wuxuu leeyahay Nidaam Gelitaan u gaar ah (Pantheon-Greeter) laakiin kugula talin maayo isticmaalkiisa, maxaa yeelay mararka qaar wuu ku dhacaa markuu miiska wareejinayo (Ex: laga bilaabo XFCE ilaa Pantheon).
Tusiyaha Tilmaamuhu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad furto oo aad maamusho ciyaartoy kala duwan, lagana tijaabiyo Deadbeef (ma uusan shaqeyn), Buuq (wuu shaqeeyey) iyo Clementine (shaqeeyey).
Ma aqaano inay ku shaqeyneyso Debian, laakiin waxay u badan tahay inay shaqeyn doonto.
Tilmaamaha rakibida ayaa ka yimid http://www.blane.me/2012/03/test-drive-elementary-os-luna/. Xilligan boggu wuu dhacaa mararka qaarkood, waxaan ka badbaadiyey tilmaamaha aan ka helo Terminal-kayga had iyo jeer la isku halleyn karo 🙂
Ma aqaano haddii menu-yada Slingshot-ka wax laga beddeli karo, waxaan isku dayay Alacarte mana aysan shaqeyn.
Shaki kasta / walaac / tabarucaad kasta ayaa lagu dari karaa faallooyinka. Rabshaduhu waxay dhaliyaan rabshado markaa aan isku dayno inaan si nabad ah ugu qaadno 🙂
Laptop-kaygu ma aha layaabka siddeedaad ee adduunka: waa 4 sano jir, kaarka Intel ee kaararka (mid ka mid xun), 1GB oo RAM ah welina si fudud ayuu ku socdaa, waa wax GNOME-Shell, Midnimo (2D iyo 3D midkoodna) ama KDE (akhri Digniinta 2).
Waxaan helay isdhexgal wanaagsan oo QT ah mahadnaqa QT-Config (sudo apt-hel rakib libgnomeui-0 qt4-qtconfig)
Guud ahaan nidaamku wuxuu dareemayaa fudeyd iyo deg deg, wax dhib ah kalama kulmin isticmaalkiisa waxaanan ka dhigay kumbuyuutarkeyga ugu weyn usbuuc, marka waxaan saadaalinayaa mustaqbal wanaagsan kooxda Elementary iyo nidaamkooda.
Ugu dambeyntiina, waxaan kaaga tegayaa tallaalka Desktop-kayga:
Mawduuca & Astaamaha: Dugsiga Hoose
Dr. Stein wuu ogolaaday miiskan.
PS: Waxaan kugula talinayaa cunista nafta, kuuma niyad jabi doonto 🙂
Digniinta 1aad: Waa maqaalkeygii ugu horreeyay / cashar / rayn rayn / wax ku biirinta DesdeLinux, sidaa darteed fadlan iska cafi dhammaan dhibaatooyinka heesaagan yar.
Digniinta 2: Fadlan ka fogow faallooyinka dadka kuu keena nacaybka muuqaalka ah Ubuntu (iyo kuwa deriska ah), MacOSX (maaddaama ay u calaamadeeyeen desktop-ka nuqul) iyo faallooyinka xag-jirka ah (wax kastoo ah OS / Graphic Environment).
Digniinta 3: Pantheon wali waa software tijaabo ah oo aan ku habboonayn bay'adaha wax soo saarka (inkasta oo aanan wali la kulmin dhibaatooyin xasilloonida daran), haddii aad rabto inaad rakibto ha ilaawin inaad cusbooneysiiso maalin kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Pantheon: Khibradda Dugsiga Hoose
Haddii anime qofka cunaya anime horey loo soo saaray, akhri manga. Way sii jeclaan doonaan. Marka laga hadlayo Sawaxanka, sida xiisaha leh ee dhabta ah 3da arrimood ee aan tixgelinayo markii aan dooranayo ciyaartoy maqal ah ayaa la la'yahay, waa inaan sugnaa inta ay ka hagaajinayaan oo aan siino isku day
Waxyaabaha xun ee ku saabsan Cunista Soul waa in ay tahay bille (laakiin waxay u muuqataa in dhammaadku dhow yahay). Ku saabsan Sawaxanka Waxaan isticmaalaa oo keliya hotkeyga iyo asalka, waxa barbaraha ah ee aan qoro maxaa yeelay waan ogahay inay jiraan dad adeegsada.
Maqaal aad u wanaagsan, waxaan isticmaalayaa os-ka hoose ee Ubuntu oo si fiican ayuu u shaqeeyaa, laakiin wali waa cagaar. Feedler Waxaan u maleynayaa inuusan shaqeyneyn, mashruuca waa laga tagay hadaan si sax ah u xasuusto. Oh iyo markii ugu dambeysay ee aan isku dayo inaan ku rakibo xirmooyinka aasaasiga ah adoo adeegsanaya aur way suurtoobi weyday. Laakiin waqti hore ayey ahayd.
Ma jiro qof quudinjiray oo "la soo badbaadiyay" iminkana wax badan ayay soo hagaageen, waxaan soo sheegay dhowr ciladood oo ku saabsan 2 bilood ka hor waana la hagaajiyay.
Ka sokow inay taageero u fidiyeen granite, oo lagu daray shaqooyin cusub, dookhyada wadahadalka, cusbooneysiinta otomaatiga oo hadda waxay leedahay taageero loogu talagalay menu-ka boostada.
Ugudambeyntii way fiicantahay marwalba, waa inaad rakibtaa ama cusbooneysiisaa, fiiri launpad!
Falanqeyn wanaagsan oo nidaamka ah, waxaa la igu qasbay inaan rakibo oo aan tijaabiyo. Runtu waxay tahay inaan anigu shakhsi ahaan jeclaan lahaa inay joojiso noqoshada wax-soosaarka (KA DIGTOONOW akhri digniinta) ee Ubuntu iyo inaan sameeyo wax la mid ah sidii ay ku sameeyeen Fuduntu ama Chakra. Anigu waxaan ahay isticmaale Arch Linux ah waxayna igu tijaabineysaa inaan ku tijaabiyo wax la mid ah KDE Mod, taas oo ah, nooc kafiican deegaanka jawiga Arch laakiin leh gnome elementary.
Salaan iyo wanaag.
Way fiicnaan laheyd, in kasta oo wareegga jawiga bey'addan uu soo jiito indhahayga
Cunista Qofka xD
Kaliya in la yiraahdo Feedler-ka waxaan tijaabiyey qiyaastii usbuuc ama wax ka hor oo si fiican ayey u shaqeysay. Ma aqaano haddii mashruuca laga tagay iyo in kale, laakiin barnaamijku wuu shaqeynayaa. Waxaa laga yaabaa inay wax yar ka beddeleen oo hadda ii keenaya inaan dhibaatooyin yeesho laakiin taasi waa wax kale.
In kasta oo aanan ku siin karin 10 qoraalkaaga, haddana waxay si fiican u noqotay inuu noqdo maqaalkaagii ugu horreeyay ^^, hambalyo.
Waxaan ahay mid ka mid ah kuwa ku taageeraya tan sameynta dadka ka soo jeeda Gnome-Shell. Tiknoolajiyadda ka dambeysa waa mid aad u awood badan, oo dabacsan, in kasta oo aanan weligey jeclaan go'aannada naqshadeynta Gnome, tiknoolajiyadda ay adeegsadaan ayaa iga dhigeysa inaan hoos u dhigo * ¬ *.
Anigu waxaan ka mid ahay kuwa dhahaya: Inta intaa ka sii badan, ka sii fiican, maxaa yeelay sanado yar gudahood waxaan arki doonaa mid ka mid ah dadkaas oo dhan kan noqonaya midka mudan. D
Mid ka mid ah horumariyeyaasha aasaasiga ah ee wareysiga ayaa sheegay in qaybinta iyo waxyaabaha kala duwan ee loo yaqaan 'DEs' ay ahaayeen wax la mid ah gawaarida, in hal gaari oo kaliya uusan awoodin inuu qanciyo qof walba baahidiisa. Waan ku raacsanahay.
Pantheon maaha fargeeto qolofta gnome ...
Waxay bilaabeen wax walba, in haddii ay adeegsadaan maktabadaha jira iyo teknoolojiyada si ay ugu diyaariyaan barnaamijka 'pantheon', ay macquul tahay ama halkii loogu talo galay.
Hadaad si dhaw u fiirsato, pantheon ma isticmaasho compiz ama qolofta gnome, waxay isticmaashaa GALA, dusheeda waxay adeegsanayaan awooda isku-buuq, jahwareer iyo metacity si ay u horumariyaan Gala.
Waxaa laga yaabaa in taasi ay tahay sababta gala ay aad ugu egtahay qolofta gnome (marka hore) maxaa yeelay waxay adeegsadaan isku buuq, metacity iyo teknolojiyada gtk.
Ku rakib Pantheon on my ubuntu 12.04 maadaama aan aad u xiiseynayo tijaabinta.
Waan jeclahay laakiin fursado badan ayaa si fudud u lumay, kii ugu xumaa wuxuu ahaa xilligii aan ku soo laabanayay midnimada, waxay ahayd inaanan bilaabin mid caajis ah ama mid sare ah.
Ka tirtir Pantheon laakiin wax natiijo ah malahan, qof ma i caawin karaa?
isku day inaad nidaamka ku nadiifiso "sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean" ka dibna meesha ka saar midnimada "sudo aptitude purge unity" oo dib u raadi "sudo aptitude rakib midnimada"
waan ka xumahay, dib u rakibo "sudo aptitude install ubuntu-desktop"
Perseooooo, hadaad qortay sida loo rakibo pantheon hoose maxaa yeelay waxaan heystaa fedora 17 oo leh lxde waxaana jeclaan lahaa inaan awoodo inaan ku rakibo hehehehe tijaabi sida dhaq dhaqaaqa hoose u socdo aad ayaad u mahadsantahay.
Orale, Weligay ma maqal inay leedahay nidaam dhammaystiran, marka laga reebo astaamaha waxba. Waxaan arki doonaa waxa dhaca 😀
Ku jawaab Crisnepita
Waxay umuuqataa mid weyn, hal su’aal? Qofkasta wuu ogyahay Marka Elementary OS Luna 0.2 lasii deyn doono
Sida laga soo xigtay Daniel Foré: "markay diyaar tahay", waxay hadda ka shaqeynayaan Ubuntu 12.10, sidaa darteed waxay u badan tahay inay noqoto Oktoobar sannadkan ama Abriil ee soo socota
oh! Ilaahayow, ma isticmaashaa daaqadaha vista?! ahahahaha waxaan moodayay in qofna uusan isticmaalin mar dambe 😉
elruiz1993 waad seegtay xusida GALA, maareeyaha daaqadaha aasaasiga ah ee ku saleysan metacity iyo mutter. Haddii pantheon-desktop iyo gala ay sababaan khibrad aad u fiican oo isticmaale ah, waad siin kartaa iskuday, inkasta oo sida wax kasta oo Luna ah ay wali tahay horumar.
Waad ku mahadsan tahay dhammaystirka boostada, wax fikrad ah kama haysto. Waxaan u maleynayay inay wali isticmaalayaan midka Gnome-Shell, in kasta oo aan marwalba arko baakadkaas oo la yaab leh midna loo yaqaan 'cerbere' (oo aanan wax fikrad ah ka haysan waxa ay qabato labadaba)
Cerber waa adeeg daemon loo sameeyay si looga fogaado shilalka nidaamka, waxay shaqeysaa markii barnaamij aasaasi ah uu burburo ka dibna cerbere ayaa dib ugu celisay shaqadii, aragti ahaan waa in aan la isticmaalin (haddii barnaamijku xasilloonaa) laakiin wuxuu ku sameeyaa deegaan kasta xasiloon (muuqaal ahaan) maadaama xitaa midnimadu ay burburto mararka qaarkood codsi sidan oo kale ah ayaa caawiya!
Waqtigan xaadirka ah Gala waa mid cagaaran, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay waxa ugu balan qaadaya aasaasiga, barnaamijyada kale ee aasaasiga ah ee aadan xusin maxaa yeelay wali waxaad ku jirtaa xaalad tijaabo ah waa ergo (manager manager), qor (codsi fudud oo lagu qoro qoraalka qaabeysan) iyo euclide (waa fikrad loogu talagalay vala iyo hoose), qaar waan baaray laakiin sida ugu dhow waxkastoo dugsiga hoose ku jira waa fikrado wanaagsan laakiin wali horumar ayey kujiraan ugu yaraan hada!
Salaan iyo bogaadin booska, waa kii ugu horreeyay ee aan ku akhriyo Isbaanishka ee ku saabsan dugsiga hoose! 🙂
Wow, waxaad moodaa inaad sifiican ogala socotid aniga aasaaska dugsiga hoose, waxaan jeclaan lahaa inaan fiiriyo barnaamijyadan cusub oo aan cusbooneysiiyo maqaalka si waafaqsan waxa aan ka helo.
PS: Aad baad u mahadsantahay, runtii macluumaadka ku saabsan dugsiga hoose ee Isbaanishka waa ku yar yihiin (guud ahaan kuwa aan helay waa inaan rakibo Beatbox ama marlin) laakiin ma jiraan wax kale 🙁
U fiirsasho fudud.
Muhiim maahan in lagu daro marlin ppa tan iyo aasaasiga forkeo marlin si loo abuuro feylasha-feylasha, qaabkan oo kaliya rakibida-hoose-dhexe ayaa rakibaysa nooca marlin ee pantheon.
Ka waran haddii ay dhici karto waa in markaan cusbooneysiineyno iyo haddii aan rakibno marlin iyo desktop hoose markaa feylasha ayaa qori doona marlin marlinna wuu joojin karaa shaqada ama wuxuu noqon karaa faylal (waxay igu tiri maxaa yeelay aniga ayey igu dhacday)
Dib-u-eegista iyo faallooyinka ayaa markii horaba aad u fiicnaa, waxay igu dhiirrigeliyeen inaan isku dayo!
Hadda, waxaan qabaa laba shaki tan iyo markii aan ahay adeegsade ubuntu iyo in kasta oo aan isku dayo inaan barto anigoo raadinaya xalka dhibaatooyinka maalinlaha ah ee internetka, wali ma awoodo inaan waxbadan ku xalliyo kaligeyga. Shakigaygu waa:
sidee u maamushaa faylka .sh?
Ma aanan awoodin sinnaba: S
Xitaa waxaan rakibaa nautilus iyo gnome-terminal si aan u arko inay shaqeyso iyo in kale, laakiin waxay ii sheegtaa inuu qalad jiro oo aysan ogolaansho lahayn .. markaan sifooyinka nautilus wax ka beddelo, amarka chmod + x iyo faylasha laftiisa ...
xitaa markaan ka ordo terminal dhibaato ayaa i haysata ...
Sidoo kale, ma garanayo sababta, laakiin waxaa jira barnaamijyo dhowr ah oo aan ka soo muuqan menu-ka dusha, ma haysaa wax fikrad ah?
Si aad ugu fuliso feylasha leh kordhinta .sh, waxaad ka sameysaa terminal-ka (ama ugu yaraan sidaan oo kale ayaan ku sameeyaa) adoo naftaada ku dhejinaya amarka "cd" cinwaanka aad ku leedahay faylka .sh, tusaale:
cd Soo dejinta (haddii aad ku haysato faylka Downloads), hal marna waad fulisaa
Haddii feylku u baahan yahay rukhsad superuser waxaad kaga horraysaa ereyga "sudo" taasi waa
Waxaan rajeynayaa in tani ay ku caawin karto.
Waxaan hadda ku rakibay iso souceforge iso, si aanan "xumaan" uga helin meelaha kale, waana waxa ugu dhaqsaha badan ee aan isku dayay. Codsiyada waa run inay u egyihiin xoogaa cagaar, laakiin waxaan cusbooneysiiyaa cusbooneysiin maalin kasta xilliganna aniga igama xirna. Waa nadiif, deg deg iyo tan ugu quruxda badan ee aan soo arkay, waa inaan fursad siino dugsiga hoose os luna. By the way, in lagu daro app si slingshot ah, waxaan ku siin doonaa wixii aan ka helay internetka si aan ugu sameeyo alacarte.
Halkan: 1. Ku rakib alacarte
2. Sudo ku samee tifaftiraha qoraalkaaga oo wax ka beddel /usr/share/alacarte/Alacarte/MenuEditor.py adoo ku beddelaya dhammaan «applications.menu» «pantheon-applications.menu»
3. Ka bilow alacarte oo wax ka bedel dalabkaaga halkaa Xalku wuxuu ka yimid: https://bugs.launchpad.net/slingshot/+bug/916727
Waa la fahmay sax?
Maqaal aad u wanaagsan oo ka mid ah soosaarka Ubuntu oo ina tusaya hal-abuurnimo iyo hal-abuur. Tan iyo markii ugu horreysay ee aan arkay sub-distro-kan waxaan runtii jeclaaday is-dhexgalka nadiifka ah, fudeydka iyo fudeydka ugu badnaan la qaatay.
Waxaan u maleynayaa in kooxdan ay tahay inay qaadaan talaabada ugu dambeysa iyagoo raacaya tusaalaha Fuduntu maadaama ay leeyihiin dhamaan awooda iyo tamar si ay u gaaraan waxyaabo aad u wanaagsan oo xiiso leh iyadoon loo baahneyn inay ku xirnaadaan qorshayaasha cidna.
Waxay sidoo kale na tusayaan in isbeddelka hadda socda ee la raacayo, ugu yaraan muddada dhexe, ay tahay fududaan iyo nooc ka mid ah "heerka" marka la eego isdhexgalka, sida Gnome, Android loogu talagalay PC-ga iyo mashruuca ay sameeyeen (haddii aad awoodid sidan u wac)
Waxaan rajeyneynaa in nooca cusub dhowaan la soo saari doono (midka hadda xasilloon looma heli karo sida loo daabacay maaddaama ay ku saleysan tahay Ubuntu 10.10 sidaas darteedna uusan haysan taageero ama cusbooneysiin) oo tijaabi.
Kooxda Dugsiga Hoose ee heer sare
Waan isku dayay laakiin ima qancin. Malaha maxaa yeelay ma aqaano sida wanaagsan ee aan u qaabeeyo.
Muhiimadu waxay tahay, waxaan rabaa inaan gebi ahaanba tirtiro. Sidee baan sameyn karaa?
Fudud, kaliya ka tirtir isla baakadaha aad rakibtay (Waxaan ula jeedaa, sudo apt-get saar meesha aasaasiga ah ee aasaasiga hoose-desktop adium-theme-postler dexter-contacts feedler footnote gaffel snap libgranite-demo marlin-plugin-dropbox marlin-plugin-ubuntuone switchboard - gnome-control-center plank-plug wallpaper-plug zramswap-enabler).
Kadib sudo apt-get clean && sudo apt-get autoremove (si aad uga saarto xirmooyinka agoonta ugana tagto sidii aadan waligaa u isticmaalin)
Waxaan kuugu hambalyeynayaa elruiz1993, maqaalka waa mid heer sare ah oo aan loogu talagalin nuxurka laftiisa, laakiin inuu leeyahay kubbadaha "DIGNI" akhristaha; sida ay tahay inaad wax u aqriso; yaa leh inuu faallo ka bixiyo; iyo in AADAN odhan. Waxaad leedahay kubbado ka badan xirfadlayaal badan oo saxaafadda ah oo aan ogahay kuwaas oo in ka badan saddex iyo toban sano aan weligood ku dhiirran in ay muujiyaan fikradda wada-hadalka. Tani waa halkii fikrad fikrad lagu soo rogi lahaa.
Marka waxaan u maleynayaa in aniga, oo ah isticmaale iMac ah oo xiiso leh oo ku saabsan adduunka Linux, tijaabinta nidaamkan, uma maleyn karo inaysan ahayn nuqul la tuuri karo ee Mac OS?
Qof baa shakiga iga saara, gardarrada joogtada ah iyo aflagaadada afeed miyay joogto ku yihiin xiisaha Linux? mise waa wax iska soo daba dhacaya?
Waa salaaman tahay Francisco, maahan inaan rabo inaan dadka u sheego waxay dhahayaan, laakiin waa inay ku sameeyaan si edeb leh (waad ogtahay inta troll iyo xagjirnimada xagjirka ah ee ku jira dhulalka Linux). Marwalba waxaan aaminsanahay inay dadku xaq u leeyihiin inay sheegaan waxay rabaan inta ay si edeb leh u sameeyaan.
Talo-bixinteyda waxaan rabay inaan iska ilaaliyo "KDE-ga isla sidaas ayaan sameyn karaa anigoon timahayga qasan" ama "Maaddaama aysan waxba abuurin karin waa inay nuqul ka sameeyaan Mac", taas oo aan qiil u helin wax kasta oo ay sameeyaanna ay tahay demotivate Linux isticmaalayaasha iyo mid iskaashi ahaan ah.
Salaan iyo mahadsanid akhriska maqaalka.
Waad salaaman tahay, waxaan su'aal ka qabaa waxyaabaha soo socda: Waxaan doonayay inaan masaxo qalabka wax lagu rido ee aan ku lahaa Slingshot mana aanan helin wadadan sida aad ku magacowdo: /home/.configure/plank/dock1. Ma jirtaa waddo looga saaro? qaar ka mid ah barnaamijyada aan ku maareeyo, ma heli karo jidka ku xeeran. Waan ka xumahay laakiin waxaan ku cusubahay Linux!
Hello Matias, ugu horreyntii waxaan ku soo dhaweynayaa adduunka naxdinta leh ee GNU / Linux. Sadarka aad tilmaamtay waa in la tirtiro astaamaha loo yaqaan 'Plank icons' (dock), si loo saxo Slingshot waxaan cusbooneysiin doonaa casharka
Maqaal aad u wanaagsan, waan tijaabinayaa hadda
Waxay ila tahay nidaam aad u wanaagsan ... waa waxa aan in badan filayay inaan ku arko nidaamka qalliinka ... xitaa ubuntu ma qancin karto ... laakiin nasiib daro waxay ii soo bandhigeysaa khilaafyo daran oo u dhexeeya AMD VGA-gaaga iyo kuwa gaarka loo leeyahay darawallada iyo maadaama darawallada bilaashka ah ay wali xishood yihiin, waxaa laygu qasbay inaan ku laabto Ubuntu markasta, waxaan si daacad ah u rajaynayaa in noocyada dambe ay tani is beddeli doonto ... maxaa yeelay waa nidaam mudan in la isticmaalo ... salaan ... aad u wanaagsan maqaalka.
Ma jiraa qof ii caddeyn kara haddii Pantheon yahay ama uusan ahayn Shell for Gnome?
Hagaag, waa Shell lagu dhisay GTK3.4 (wax la mid ah XFCE ee GTK2)
Saaxiibkaa oo kale, waxaan hada rakibey dugsiga hoose, sababta fariintaydu waxay ahayd inaan ku waydiiyo haddii ay suurtogal tahay dugsiga hoose in lagu soo celiyo baarka madhan ee aan daah-furnayn ee mawduuca aasaasiga ah ee asalka, salaan iyo mahadsanid
Waxaan hayaa Ubuntu 14.04 LTS, ka dibna waxaan rakibay pantheon si aan u tijaabiyo laakiin toobiyeyaasha kumbuyuutarrada aniga ima shaqeeyaan, isla waxaas ayaa ku dhaca gnome shell ... ma jiraa qof garanaya sababta ama haddii wax laga qaban karo?
Haddii Buuqku leeyahay barbaraha, u hel si fiican wehelkiisa. Sii wad boostadaada, weyn distro.